Hoobiyihii al-Shabaab ee Dhuusamareeb lagu weeraray oo la qabtey -SAWIRO - Horseed Media • Somali News
February 5, 2021Galmudug
Hoobiyihii al-Shabaab ee Dhuusamareeb lagu weeraray oo la qabtey -SAWIRO
Mar kale ayaa habeenkii xalay oo Jimcada magaalada Dhuusamareeb lagu soo weeraray Hoobiyaal kuwaas oo ku dhacay daafaha magaalada iyo gudaha. Ciidamada Gorgor ee xoogga dalka oo u diyaarsanaa ayaa helay kooxdii weerarka ka danbeysey ee Malayshiyadka al-Shabaab.
Taliyaha guutada 15aad ee ciidanka Gorgor Maxamed Dhagaweyne ayaa soo sheegay in ay dileen ugu yaraan 8 malayshiyaadka al-Shabaab oo watey Gaari Toyota Hilux ah oo koonfurta looga yaqaan Qooqan, waxaana ay gacanta ku dhigeen gaarigii, Qoriga Hoobiyaha ee magaalada lagu soo weeraray, meyadadka 8 al-Shabaab ah iyo laba nolol lagu qabtey.
Habeenimadii 2 Feberaayo ayaa kooxdan magaalada ku soo tuureen rasaasta Hoobiyaha, kuwaas oo baxsadey markiiba, waxaana habeenkaas magaalada ku sugnaa qaar kamid ah madaxda Dowlad goboleedyada dalka, Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha.
Ururka a-Shabaab ayaa ka taliyo qaybo badan oo kamid ah gobolka Galguduud.
Dhuusamareeb waxaa ka socda shirkii ugu danbeeyey ee lagu xalinayo caqabadaha hortaagan taabbo gelinta heshiiskii 17 September 2020.